Vaovao Mafana · Desambra, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Vaovao Mafana · Desambra, 2008
Tantara mikasika ny Vaovao Mafana tamin'ny Desambra, 2008
Ghana : miandry izay ho filohany
Ghana 30 Desambra 2008
Tato anatin'ny 2 taona farany no nahitana ny fifidianana tsy nanjary indrindra taty amin'ny ilany atsimon'ny faritra Sahara aty Afrika. Ny fifidianana filoham-pirenena sy parlemantera tany Kenya tamin'ny herintaona dia nahitana tsy fahombiazana ary niteraka herisetra ara-pôlitika izay narahana fitakiana tsy hita isa.Ny fifidianana tany Zimbaboe ny volana martsa 2008...
Fiji sy New Zealand miditra amina ‘famonoan-tena ara-diplaomatika’
Fiji 29 Desambra 2008
Mihenjana ny tady eo amin'ny fifandraisan'i Fiji sy New Zealand nanomboka ny Talata teo raha samy nandroaka ireo Lehiben'ny diploamaty niasa tany aminy avy ny roa tonta. Tanaty vàlan-dresaka ho an'ny mpanao gazety io Talata hariva io, nanambara ny fitondrana foibe ao Fiji fa tsy noho ny fandàvana tsy hanome...
Nisy fanafody pesta mahafaty niraraka tamin'ny reniranon'i Pirapetinga ka nahafaty 80 taonina trondro, lambondrano, sokatra, vorona ary biby hafa ihany koa. Ny tena naharatsy ny voina dia tao anatin'ny fotoanan'ny fitomboan'ny biby ahiana ho lany taranaka indrindra (fanatodizana sy fiterahana) no nisian'ity loza nataon'olombelona ity. 20 andro taty aorian'ny fampiatoana vao namintimpitina ny toe-draharaha ny orinasa tompon'antoka tamin'ity raharaha ity. Sary sy ny filazan'ny mpamaham-bolongana.